Samabesi khabar | Samabesi khabar - प्रेम प्रकट गर्न किन दिइन्छ रातै गुलाफ ?
प्रकाशित मिति: माघ २५, २०७८
काठमाडौं, २५ माघ । जबजब प्रेमको कुरा आउँछ, तबतब फूललाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरेको देख्न पाइन्छ । कसैलाई धन्यवाद भन्न होस् या बधाई दिन, तपाईं आफ्नो तर्फबाट जब शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ भने फूल उपहार दिनुहुन्छ । फूल नै एउटा यस्तो पर्फेक्ट उपहार बनिदिन्छ, कुनै शब्द प्रयोग गरेर बोलिरहनु आवश्यक नै पर्दैन । फूलले भावना प्रकट गर्छ ।
यही कुरा प्रेम प्रकट गर्दा दिइने रातो गुलाफको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै लागू हुन्छ । रातो गुलाफ आफ्नो विशेष मानिसलाई दिइन्छ, यसले तपाईं कति नजिक हुनुहुन्छ भन्ने बुझाउँछ । रातो गुलाफ दिइसकेपछि तपाईंले ‘आई लभ यु’ भनिरहनै पर्दैन ।
कहिलेकाहीँ जोडीबीच झगडा परेको छ भने पनि त्यसलाई टुंग्याउन रातो गुलाफ दिने गरिन्छ । मन परेको मानिसलाई प्रपोज गर्नुपर्दा रातो गुलाफजत्तिको उपयुक्त वस्तु अरु के नै होला र !
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, जब प्रेमको कुरा आउँछ तब किन सधैं रातो गुलाफ नै दिने गरिन्छ ? कतिपय मानिस यसलाई एउटा चलन मान्छन्, अरुले त्यसै गरेको देखेर आफूले पनि रातै गुलाफ दिएको भन्ने गर्छन् । तर सत्य कुरा के हो भने, गुलाफसँगै यसको रातो रङमा विशेष अर्थ लुकेको हुन्छ । यसले प्रेमलाई छताछुल्ल प्रकट गरिदिन्छ ।
कहिलेदेखि हुन थाल्यो रातो गुलाफको प्रयोग ?
प्रेम प्रकट गर्न रातो गुलाफ प्रयोग हुन थालेको हजारौं वर्ष भइसकेको छ । ग्रिक तथा रोमन माइथोलोजीमा गुलाफलाई प्रायः एफ्रोडाइट (प्रेम संकेत- एन्सिएन्ट ग्रिक गडेस अफ सेक्सुअल लभ एन्ड ब्युटी) मानिन्छ । यसलाई फर्टिलिटीको भगवान् पनि मानिन्छ । गुलाफलाई पनि यस्तै भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
रातो रङलाई धैर्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । प्रेम भनको प्यासन पनि त हो । यही कारण रातो गुलाफ डिप लभ एक्सपे्रस गर्न दिने गरिन्छ । यसको अर्थ तपाई सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र कुनै विशेष कमिटमेन्ट गर्न पनि चाहनुहुन्छ । यसबाट तपाईंको आफ्नो साथीप्रति बलियो भावना रहेको कुरा प्रकट हुन पुग्छ ।
गहिरो रातो रङले गहिरो इमोसनलाई व्यक्त गर्छ । र, उज्यालो रातोले रोमान्स प्रकट गर्छ । रोज बड यदि तपाईंले कसैलाई दिनुहुन्छ भने, त्यसले तपाईंको प्रेम साँचो, निर्मल र देखावटीपनबाट टाढा रहेको बुझाउँछ ।
विवाहित जोडीले पनि प्रयोग गर्छन् रातो गुलाफ
विवाहित जोडीले जब एकअर्कालाई रातो गुलाफ दिन्छन् तब त्यहाँ केवल लभ र रोमान्स रहँदैन । त्यहाँ त दुईबीचको सम्बन्ध खुसीपूर्ण रहेको पनि जनाउँछ । यो बुझाउँछ कि, त्यो जोडीको वैवाहिक जिन्दगी धन्य रहेको र एकअर्काप्रति समर्पित तथा विशेष रहेको छ ।
१४ फेबु्रअरी नजिकै आइरहेको छ । प्रणय दिवसको नामले प्रख्यात भ्यालेन्टाइन्स डे पछिल्लो समय नेपालमा पनि खुबै प्रचलित हुन थालेको छ । र, त्यसदिन रातो गुलाफ दिएर आफ्नो माया प्रकट गर्ने चलन हामीकहाँ पनि फस्टाउन थालेको छ । नेपालमा लाखौं रुपैयाँको रातो गुलाफको कारोबार आगामी १४ तारिखका दिने हुने पक्का छ ।